December 14, 2019 - Hargeele - Wararka Somali State
Ethiopia News December 14, 2019
Africa in the news: Nigeria’s visa on arrival, Ethiopia’s agreements with IMF, World Bank, and aviation update Brookings InstitutionSii akhriso
Soomaaliya December 14, 2019
Muqdisho.(SONNA):- Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan wada tashi ah la qaatay Guddiga Qaran ee Dhab-u-heshiisiinta iyo Wadahadallada Dowladda Federaalka iyo Somaliland. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in howl gelinta Guddigan iyo shaqooyinka ay qabteen muddadii koobneyd ee ay magacaabnaayeen ay muujinayso sida ay uga Sii akhriso
Cayaaraha December 14, 2019
(Madrid) 14 Dis 2019. Zinedine Zidane ayaa wuxuu ku dhawaaqay liiska xiddigaha kooxda Real Madrid ee kaga qeyb galaya kulanka horyaalka La Liga ay habeen dambe kula ciyaari doonaan naadiga Valencia. Real Madrid ayaa isku diyaarineysa kulanka ay habeen dambe ku booqan doonaan kooxda Valencia garoonka Mestalla, kaasoo ka tirsan kulamada 17-aad ee horyaalka La Liga […]Sii akhriso
(Spain) 14 Dis 2019. Kooxaha Real Sociedad iyo Barcelona ayaa dhibcaha ku qeybsaday garoonka Reale Arena, kaddib markii ay ku kala baxeen barbaro 2-2 ah, kulan ka tirsanaa horyaalka La Liga ee dalka Spain. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray barbaro 1-1 ah. Daqiiqadii 12-aad kooxda martida loo ahaa ee Real Sociedad ayaa heshay […]Sii akhriso
(London) 14 Dis 2019. Kooxda Bournemouth ayaa guul kaga soo heshay dhigeeda Chelsea oo ay ku booqatay garoonka Stamford Bridge, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 0-1, ciyaar ka tirsaneyd kulamada 17-aad ee horyaalka Premier League ee dalka England. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa waxay ku soo dhamaatay barbaro 0-0 ah. Qeybta labaad marka dib leysugu […]Sii akhriso
(Madrid) 14 Dis 2019. Macalinka kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa wuxuu shaaca ka qaaday go’aankiisa kaga aadan xiddiga reer Brazil ee Casemiro kulanka soo aadan ee Valencia. Real Madrid ayaa isku diyaarineysa kulanka ay habeen dambe ku booqan doonto kooxda Valencia garoonka Mestalla, kaasoo ka tirsan kulamada 17-aad ee horyaalka La Liga dalka Spain. […]Sii akhriso
Dooxa (SONNA), Sabti, Deseembar 14, 2019— Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, mudane Xasan Cali Khayre ayaa magaalada Dooxa kula kulmay dhiggiisa dowladda Qatar, Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani. Labada Ra’iisul Wasaare ayaa ka wada hadalay xoojinta xiriirka labada dal ee walaalaha ah iyo iskaashiga laba geesoodka ah. Ra’iisul wasaaraha Sii akhriso
Golaha wasiirada JDFI ayaa ka dooday arimo kala duwan go’aamana ka soo saaray.
DDS December 14, 2019
Golaha wasiirada JDF itoobiya ayaa kulnakoodii 77aad kaga dooday arrimo badan oo kaladuwan islamarkaana go’aano kasoo saaray. Golaha ayaa ugu horayntii sifiican ufalanqeeyey bayaanka Qabyda ah ee nidaamka maamulka Mashaariicda dawlada federaalka, iyagoo kadib Markii ay Bayaan Qabyeedka Waxkabadaleen ugudbiyey Golaha wakiilada shacabka si ay u ansixiyaan. Sidoo kale Golaha Sii akhriso
(Liverpool) 14 Dis 2019. Liverpool ayaa guul ka heshay kooxda Watford oo marti ugu aheyd garoonka Anfield, kaddib markii ay kaga adkaatay 2-0, kulan ka tirsanaa horyaalka Premier League ee dalka England. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 1-0 ay ku hoggaamineysay kooxda martida loo ahaa ee Liverpool. Daqiiqadii 38-aad kooxda Liverpool ayaa hoggaanka […]Sii akhriso
(La Liga) 14 Dis 2019. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ah oo ay garoonka ku soo geli doonaan kooxaha Real Sociedad Iyo Barcelona kulanka goor dhow soo gali doona ee horyaalka La Liga. Hadaba dhanka hoose kaga boggo Shaxda rasmiga ee kooxaha Real Sociedad Iyo Barcelona: Real Sociedad XI: Alex Remiro, Joseba Zaldua, Diego Llorente, Ander […]Sii akhriso